musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » KuSandals Resorts Chaunongoda rudo
Sandals Resorts muCaribbean resorts inopa akanakisa ese-anosanganisira ezororo zverudo kune vakaroorana murudo.
Nakidzwa neakanakisa ese-anosanganisira emahombekombe emahombekombe kuSandals Resorts muCaribbean uye ona kuti nei vachipa zororo rerudo kune vakaroora murudo neakawanda emhando inclusions kupfuura chero imwe yemhando yepamusoro beach resort.
Sandals Resorts inoratidzira yepasirese yakazara yakazara-inosanganisira pasuru.
Vakaroorana vanogona kunakidzwa nemavara machena ejecha jena, 5-nyeredzi Global Gourmet ™ yekudyira, pekugara pakanaka, risingaperi premium doro, inonakidza mitambo yemvura, nezvimwe.
Shangu dzave Kambani Inotungamira Yenyika-Inotungamira Yenyika kwemakore makumi maviri nemashanu akateedzana kubva kuWorld Travel Awards.
Fungidzira uchisvika muimba yekutandarira yakasarudzika panhandare yendege, uchiendeswa nechokumirira, uye uchipinda munzvimbo yekutandarira umo zvese zvese zvinosanganisirwa. Fungidzira rusununguko rwekufamba uchienda mune chero nzvimbo yekutandarira uye uchinakidzwa nechero chaunoda palette, uchijoinha pane zviitiko zvisingade kuti ubudise kadhi rako rekubhangi kana kusaina tebhu, uye pasina kuverenga tip kana gratuity. Ndiwo mufaro wakachena wezvese-zvinosanganisira zororo. Uye paSandals, zvese-zvinosanganisira kutonga kukuru.
Yese Sandals beach resort inogara yakaringana pamhenderekedzo inokatyamadza pane zvitanhatu zvezvakanakisa nzvimbo dzinopisa dzezvitsuwa muCaribbean, nharaunda inozivikanwa nekuda kwekusingaperi kwayo jecha jena-jecha, mvura inoyevedza yegoridhe uye kuvira kwezuva kudanana. Kubva kuJamaica inodziya reggae pulse kuenda kuBahamas 'kurova kwakakwenenzverwa uye kubva paSanta Lucia's volcanic ukuru kuenda kuAntigua's exotic kukwezva.
Caribbean's Most Exclusive Suites
Shangu dzine nzvimbo dzekugara dzakanakisa uko ivo vakafunga nezve zvese kuita nzvimbo yekudzokera yakakwana kune vakaroorana murudo. Kubva pamvura inoshamisa pamusoro pemvura-dzimba uye mashura anoshamisa emawere ane 180-degree maonero, kukwirisa Skypool Butler Suites ane infinity-kumucheto pombi dzemadziva uye akasarudzika Rondoval Suites, Sandals Signature Nzvimbo dzekugara zvine chokwadi chekusimudzira kudanana kune zvitsva zvepamusoro.
Yakavanzika Offshore Islands
Ndiine Sandals yakasarudzika Offshore Islands vashanyi vanowana 2 tropical ese-anosanganisira zororo pamutengo weimwe. Inowanikwa pa Sandals Royal Caribbean uye Shangu Royal Bahamian maminetsi chete kubva kunzvimbo huru yekutandarira.
Kutora Madziva neMweya weRudo
Rudzikamisa runyararo rwakadzikama rweSandals madziva anopenya. Bira nguva dzerunyararo rwekubatana pakati porunyararo rwemahara-fomu regungwa dziva, unakirwe nesimba redu siginecha yekushambira-kumusoro mabhawa emvura, kana kuona kukwirira kwemazita edu ekupinda zero-ayo anova kurova kwemoyo kwenzvimbo dzatinogara. Rimwe nerimwe remadziva edu ane hunhu hwakasarudzika uye mazhinji acho ingori nhanho kubva kugungwa.
Michato & Honeymoons kuWorld Most Resorts Resorts
PaSandals, nyaya dzevaenzi 'dzakasarudzika uye dzakakosha ... uye michato yavo iri futi. Ndicho chikonzero nei vakatsiva mapakeji emuchato nevarongi vemuchato, vachigadzira ruzivo rwekuzvimiririra. Zvese zvekuwedzera zvakawedzerwa kuti riite zuva rakakosha kunyangwe rakanyanya kushamisa. Saka udza Sandals hope dzako, uye vachachiunza kuhupenyu.
Yese Sandals Yese-Inosanganisira Yekuzorora Package inosanganisira: